Zama Khoza – The Ulwazi Programme
Categories Culture, History, News, People Tags henna, mehndi ceremony
Izikhukhula zidale omkhulu umonakalo esikundazweni KwaZulu Natali (KZN) ngemuva kwemvula eyithele (enile) izinsuku zilandelana. Izimvula ezinamandla bezilokhu zibikwa kepha ubungalindelekile umonakala oshiywe izikhukhula ezinamandla kulelisonto. Sibheka kafushane isimo esinzima esifundazweni ngemuva kwezikhukhula ezinzima. Imvula eyabikwa ukuthi izoba ngu-100% yangoMsombuluko (11 Aphreli 2022) ishiye abantu abaningi budengwane, izikhukhula zihambe nemiphefumulo yabantu, imizi, imigwaqo, izikole namabhuloho. Kwemuke … Read more
Categories Environment, News Tags Izikhukhula, KwaZulu Natal
Umncintiswano weZulu Dance
UShaka Marine World uhambisana noMnyango Wezemidlalo, Ubuciko Namasiko isingathe iZulu Dance Competition ethathe izinsuku ezintathu kulempelasonto ende esiphuma kuyo. Lo mncintiswano obubophele amaqembu aqhamuka ezindaweni ezahlukene ubuyigxenye yokuthuthukisa amaciko. Kusukela ngoMgqibelo ngomhlaka-30 Aphreli 2022 amaqhembu esine adedelana kuhlungwa azoqhudelana ukuwina ikontileka yonyaka wonke yokusebenzisana ne-uShaka Marine World. Zingenile izinsizwa nezintokazi zayabhikla ingoma. Kumaqembu awu-6 afinyelele … Read more
Categories Music, News Tags Madala Kunene, Phuzekhemisi, traditional dance, Zulu Dancing
Izinqinamba ezimbekene nentsha
Abantu abasha babhekana nezinselela eziningi nsukuzonke ikakhulukazi uma sibheka amathuba omsebenzi. Kulesi siqheshana sibheka izinto ezinomthelela wezinkinga noma iziqhinamba ezibhekana nabantu abasha. INingizimu Afrika yonkana ibhekene nesikhathi esibi sokwentuleka kwamathuba emsebenzi okuyinto eyingcindezi kakhulu kubantu abasha bakuleli. Ukufunda kukodwa nje abafundi abaningi babhekani ngezinkinga zezimali zokuqhuba izifundo zabo. Abanye babasenhlanhleni yokufunda ngemali kahulumeni i-National Student … Read more
Categories Culture, News, People Tags abantu abasha